" အိမ်မှာပဲနေနေလို့ ဝက်လုံးလုံး ဖြစ်နေပါပြီဆ်ိုတဲ့ ခြူးလေး " - Cele Connections
” အိမ်မှာပဲနေနေလို့ ဝက်လုံးလုံး ဖြစ်နေပါပြီဆ်ိုတဲ့ ခြူးလေး “
အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါရိုက်ကူးနေရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ဒါ့အပြင် သီချင်းလေးတွေလည်းသီဆိုပြီး music mtv လည်းထွက်ရှိထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ “လှလှ လေး ရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်photo တွေ ရိုက်မယ်လှလှလေး ကောင်လေးတွေ ကို ချေမယ်သင်္ကြန်ဆိုတာကြီးမှာ ပထမဆုံးအမိုက်စားလေး စ ကဲမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာ…. Stay At Home တဲ့ အမေရေ.. လှလည်း မလှ နိုင်တော့ပါဘူး ဝက်လုံးလုံးဖြစ်နေပါပြီ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ အရွှန်းဖောက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရော ခြူးလေးနဲ့ ဘဝတူတွေရှိရင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” အိမျမှာပဲနနေလေို့ ဝကျလုံးလုံး ဖွဈနပေါပွီဆိုတဲ့ ခွူးလေး ”
အခုဆိုရငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှပေါရိုကျကူးနရေတဲ့မငျးသမီးတဈလကျပါ။ဒါ့အပွငျ သီခငျြးလေးတှလေညျးသီဆိုပွီး music mtv လညျးထှကျရှိထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ဒီနမှေ့ာတော့ ”
လှလှ လေး ရိုကျကူးရေးလုပျမယျphoto တှေ ရိုကျမယျလှလှလေး ကောငျလေးတှေ ကို ခမြေယျ
သင်ျကွနျဆိုတာကွီးမှာ ပထမဆုံးအမိုကျစားလေး စ ကဲမယျပေါ့အဲ့ခြိနျမှာ…. Stay At Home တဲ့ အမရေေ.. လှလညျး မလှ နိုငျတော့ပါဘူး ဝကျလုံးလုံးဖွဈနပေါပွီ ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ အရှနျးဖောကျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ CeleConnections ပရိသတျကွီးရော ခွူးလေးနဲ့ ဘဝတူတှရှေိရငျ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ ဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်က သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွချပြလာတဲ့ အိချောပို
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မိုးမိုးရဲ့ ဟော့ပေါ့ကို မိသားစုတွေနဲ့ အမှန်အကန်အားပေးနေတဲ့ နေတိုးရဲ့ ပုံရိပ်
ားလေး သွင်ဦးဟန်ရဲ့ မွေးနေ့၊ မွေးလတိုင်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေဆီ ထောင့်စေ့အောင် လှူဒါန်းပေးကြတဲ့ ပိုးအိအိခန့်နဲ့ အောင်သူ